Nagpahamatngon - Cébouano - Birman Traduction et exemples
Vous avez cherché: nagpahamatngon (Cébouano - Birman)
tan-awa nga dili ninyo igasalikway siya nga mao ang nagasulti. kay kon wala man gani sila managpakaikyas nga misalikway kaniya nga nagpahamatngon kanila dinhi sa yuta, labi pang dili kita makaikyas kon kita magasalikway kaniya nga nagapahamatngon kanato gikan sa langit.
သင်တို့သည် မိန့်တော်မူသော သူ၏စကားတော်ကို မငြင်းမပယ်မည်အကြောင်း သတိပြုကြလော့။ မြေကြီးပေါ်မှာ ဗျာဒိတ်တော်ကို ဆင့်ဆိုသောသူ၏စကားကို ငြင်းပယ်သောသူတို့သည် အပြစ်မလွတ် ရသည်မှန်လျှင်၊ ထိုမျှမက၊ ကောင်းကင်ဘုံက မိန့်တော်မူသော သူ၏စကားကို ငါတို့သည် နားမထောင်ဘဲ နေလျှင်၊ သာ၍ကြီးစွာသောအပြစ်နှင့် အဘယ်သို့ ကင်းလွတ်နိုင်မည်နည်း။
ထိုလူတို့သည် ထ၍သွားသဖြင့်၊ ယောရှုက လည်း၊ တပြည်လုံးသို့ ရှောက်၍ရေးသားပြီးလျှင် ငါ့ထံသို့ ပြန်လာကြလော့။ ရှိလောမြို့မှာ ထာဝရဘုရားရှေ့တော် ၌ သင်တို့အဘို့ စာရေးတံပြုမည်ဟု ပြည်ပုံကို ရေးသား ခြင်းငှါ သွားသောသူတို့ကို မှာထားသည်နှင့်အညီ၊
présenta (Français>Norvégien)he?salittle bossy (Anglais>Afrikaans)dare atto (Italien>Français)ridussero (Italien>Espagnol)madrileños (Espagnol>Anglais)social distance (Anglais>Tagalog)it hurts but it’s fine (Anglais>Tagalog)my favorite subject is english (Anglais>Indonésien)hindi makapili (Tagalog>Anglais)hanggang sa bahay (Tagalog>Anglais)सेक्सी वीडियो फुल (Hindi>Anglais)alvarado (Anglais>Arabe)留下 (Chinois (simplifié)>Malais)ano ang skul mo (Tagalog>Anglais)измерительными (Russe>Anglais)meaning of mentoring (Anglais>Tagalog)मैं एटा का रखने वाल (Hindi>Anglais)por imposición (Espagnol>Anglais)jawa krama ke jawa ngoko (Indonésien>Javanais)indignerad (Suédois>Anglais)access (Anglais>Serbe)aur sunao nayi taazi (Hindi>Anglais)فیلم های سکسی خارجی خارجی (Français>Anglais)thiha (Letton>Allemand)te desejo tudo em dobro (Portugais>Anglais)